Ukuphupha ngeklinikhi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Kwiklinikhi, ekwabizwa ngokuba sisibhedlele okanye isibhedlele, abagulayo ngokwasemzimbeni bafunyanisiwe, bayanyangwa kwaye bayanyangwa, ukuba kunokwenzeka. Abanye abaguli bafuna ukumiliselwa, abanye kufuneka bathunyelwe i-X-ray okanye bafakwe "kwi-tube" ukuze bafumane unobangela weempawu zabo. Imisebenzi yeklinikhi ikwabandakanya ukubelekisa kunye nokhathalelo lwesiphelo. Kwiiklinikhi ezizodwa zengqondo, abantu abanokuphazamiseka kwemithambo-luvo okanye ukuphazamiseka kwengqondo kunye neenjongo zokuzibulala bayanyangwa. Ezinye iikliniki zigxile ekuqhomfeni.
Akukho mntu uthanda ukuba sezikliniki, kodwa nakwi el mundo Ukuphupha ngamanye amaxesha kunokuba yimfuneko kwaye kuluncedo xa ukuhlala kwiklinikhi kulindelwe apho.
Ukuba siphupha ikliniki, sinokubona iintlobo ezahlukeneyo zeklinikhi. Apha unokufumana ulwazi ngakumbi malunga namaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli "yeklinikhi":
1 Isimboli yamaphupha «Ikliniki» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Ikliniki yengqondo ivela ephupheni.
1.2 Ikliniki Yokuqhomfa: Kutheni Ndiphupha Ngaye?
1.3 Ikliniki ye-ophthalmology njengophawu lwamaphupha
2 Uphawu "lwezonyango" - ukutolika ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ezonyango» - ukutolikwa kwengqondo
4 Umqondiso wephupha «lonyango» - ukutolikwa kokomoya
Isimboli yamaphupha «Ikliniki» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Ikliniki yengqondo ivela ephupheni.
Ngubani ophupha iklinikhi yengqondo, unokuyibona njengephupha elingathandekiyo, ngakumbi ukuba iphupha lisebenza kakuhle kwihlabathi lokuvuka. Iphupha elinjalo linokufihla iingxaki kwi-subconscious, ethi isoyise ngokweemvakalelo. Kwangelo xesha, umsitho wephupha ubonakalisa ukushiya iintlungu ngasemva.
Ikliniki Yokuqhomfa: Kutheni Ndiphupha Ngaye?
Ukuba umntu uphupha ngeklinikhi yokuqhomfa, eli phupha linokutolikwa njengesilumkiso, esihambelana nempilo okanye umbutho womntu ophuphayo. Kwakhona, umntu oleleyo unokungaqiniseki ngesicwangciso esizayo.
Ikliniki ye-ophthalmology njengophawu lwamaphupha
Ukuba umphuphi uye kwiklinikhi yamehlo, mhlawumbi ngotyando lwamehlo, oku kufanekisela ingcebiso yokuba ungalahli into. Mhlawumbi mvanje izinto ezithile ezibalulekileyo kunye nabantu abahoywanga. Iphupha liyakunyusa ukuba ujongane nayo ngamandla ngakumbi kwakhona.
Uphawu "lwezonyango" - ukutolika ngokubanzi
Ukuba iklinikhi ibonakala njengephupha, uphando lwamaphupha luhlala lukubona kunjalo isilumkiso xa uphupha. Kufuneka uphinde ucinge kwaye utshintshe indlela ophila ngayo ukuze ungazibeki esichengeni sesifo. Ukuba ubuthongo busempilweni, ikliniki inokulumkisa ngesifo esincinci. Emaphupheni abagulayo kuthathwa njengomfuziselo kubo cura, kuba umntu uya kuba ephethe ukuphupha.
Kodwa kukwakho nezinye iindlela ezintle zokutolikwa kweklinikhi, kuba inokwazisa ukuba amaxhala azokuphela kungekudala, isifo siyanyangeka, okanye ilahleko iya kuphila. Ngamanye amaxesha iba njalo Iindaba ezimnandienokudluliselwa kwiklinikhi yamaphupha.
Abanye abaphuphayo bazibona besebenza ekliniki njengabongikazi okanye abanonopheli. Emva koko, ngamanye amaxesha banxiba igawuni, imaski kunye neiglavu, njengoogqirha. Oku kubonisa ukuba banomonde omkhulu. ukubandezeleka kwengqondo xhaswa.
Ukuba iphupha lifana nesigulana esigula kakhulu kwiklinikhi yamaphupha, mhlawumbi nanjengobhubhane okanye isigulana esinxilisayo, oku akufuneki kubonise isigulo esibi. Endaweni yoko, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uphinde ucinge ngeprojekthi ecwangcisiweyo ngoxolo, kungenjalo uya kutshabalala. Ukuba iphupha liphuma kwiklinikhi kwilizwe lamaphupha, oko ke luphawu lokuba luza kuzimela kwaye lube ngaphakathi. ngokuzimeleyo zive.
Iziko lemfundo okanye isikolo ekuhlalwa kuso sinokubonakala siluhlobo lweklinikhi ephupheni. Ukuba kunjalo, iphupha elo ikakhulu libonisa ubunzima okanye iingxaki zobungcali.
Uphawu lwephupha «ezonyango» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, isimo sengqondo sephupha ngokubhekisele eklinikhi yinto ebalulekileyo. Kwabanye, ukuphupha ikliniki kufanekisela indawo ebanika ukhuseleko. Abanye baziva besoyikiswa kwaye besesichengeni eklinikhi.
Ngamanye amaxesha kubizwa ikliniki Indawo yokuphilisa Inxalenye yokuphupha, ufuna ukuqiniseka ukuba ukuphupha kufuna ukuphumla ukuze kubuye. Ukuba iphupha liziva lisoyikisayo eklinikhi, unokuba nengxaki yokuthemba ukuba abanye abantu banokukunceda uphile ngokukhawuleza.
Kuxhomekeke kwisenzo sokulala, ikliniki okanye isibhedlele sinakho Uncedo kwaye ifuzisela intuthuzelo kubunzima. Ukuba iphupha lityelele iklinikhi, oku kukwabonisa ukuba ufuna uncedo.
Izifo ezisekwe ephupheni zihambelana ikakhulu neengxaki zengqondo apho umntu ophuphayo kufuneka alwe nazo ebomini bokuvuka. Kule meko, iingxaki zentliziyo zimele ubomi beemvakalelo, isisu esibuhlungu esivela kwingxaki ye-indigestible, kunye nesifo samehlo ngenxa yokungaxabisi abanye.
Umqondiso wephupha «lonyango» - ukutolikwa kokomoya
Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, ikliniki iyabizwa indawo yokuphilisa itolikwe. Kukho yonke into enokubuyela kwimo yayo yendalo.